Retail Vatengi Nzendo Dzakachinja Chaizvo
Chitatu, Ndira 6, 2016 China, January 7, 2016 Douglas Karr
Dzimwe nguva ndinoshamisika kana ini ndakanyora zana zana zvinyorwa pamusoro pekuchinja maitiro ekutenga, nemazana ezvimwe zvinyorwa zvemashoko, kana tarisiro ichatanga kuteerera. Vanongoita kunge havasi kuteerera, zvakadaro. Kana isu tikanzwa isu takasiyana uye tobva tatsvaga isu tinogara tichiwana zvakafanana chinhu. Consumer kutenga maitiro kuri kuchinja. Shanduko yainonoka pakutanga, asi ikozvino iri kukurumidza. Makumi gumi nemashanu apfuura, pavashanyi gumi - 10 kana 1